8 musharax Sideed Musharax oo iskusoo diiwaan galiyay Doorashada Madaxweynaha Somalia (Akhriso Magacyada) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 28 January 2017 28 January 2017
Waxaa wali magaalada Muqdisho ka socda diiwaan galinta Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Soomaaliya oo doorashadiisa lagu wado in 8-da bisha Febraayo ee sanadkan ka dhacdo magaalada Muqdisho.
Musharixiinta isku diwaan galiyay Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa buuuxiyay sharuudihii laga doonayay Musharaxiinta sidoo kale ay bixiyeen lacag dhan 30-kun oo Dollar oo laga qaadayo Musharax kasta oo tartamaya.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed Madaxweynihii dowladii KMG ee Soomaaliya ayaa noqday Musharaxii ugu horeeyay ee is diiwaan galiya, waxaa sidoo kale isdiiwaan galiyay Musharxiin kale oo hami kaleh in Madaxweyne dalka ka noqdaan.
Diiwaan galinta Musharaxiinta u taagan Xilka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku eg maalinta berito ah, waxaana la filayaa saacadaha soo aadan in ay isdiiwaan galiyaan Musharxiin hor leh oo ka qeyb galaya tartanka Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya.